ရထားစီးလို့ မြို့ပါတ်မယ် .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Local Guides » ရထားစီးလို့ မြို့ပါတ်မယ် ..	16
Posted by weiwei on Jun 9, 2015 in Local Guides, Photography, Travel | 16 comments
ရန်ကုန် လှည်းတန်းဘူတာနားမှာနေခဲ့တာ ၁၀ နှစ်ကျော်နေပြီ။ ရထားလမ်းကို အမြဲတမ်းဖြတ်ဖြစ်ပြီး လှည်းတန်းဈေးကို သွားခဲ့ရပေမယ့် ရထားကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မစီးခဲ့ဖူးဘူး။ ရထားစီးကြည့်မယ်လို့လဲ တစ်ခါမှ မတွေးမိခဲ့ပါဘူး။ မြို့ပါတ် အဲကွန်းရထားတွေပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း တစ်ခါလောက်တော့ စီးကြည့်အုန်းမှလို့ စိတ်ကူးပေါ်ခဲ့ပေမယ့် အချိန်မပေးနိုင်လို့ မစီးဖြစ်ခဲ့ပြန်ဘူး။
ဒီအပါတ် ၆ လ ပိုင်း ၆ ရက်နေ့မှာ စနေနေ့မှာ တိမ်တွေပြာလို့ ရာသီဥတုက သာသာယာယာ ရှိနေတာနဲ့ ရထားသွားစီးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်ကူးကို ချက်ခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ပစ်လိုက်တယ်။ အနီးအနားမှာနေကြတဲ့ ဘော်ဒါနှစ်ယောက်ကို အဖော်ခေါ်ပြီး လှည်းတန်းဘူတာဆီ သွားစီးကြပါတယ်။ ရထားချိန်တွေကို မမှတ်ထားပဲသွားမိလို့ အဲကွန်းမြို့ပါတ်က နေ့လည် ၁ နာရီမှာဆိုက်မှာကို ၁၂ နာရီလောက်ထဲက ဘူတာကိုရောက်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စီးဖြစ်အောင်စီးမှာမို့လို့ အနီးအနားမှာပဲ အအေးသောက်ရင်း ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်။ ရထားနဲ့ ခရီးသွားမယ့်သူတွေနဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို တစ်နာရီလောက် ထိုင်ကြည့်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပါတ်ရထားတွေ တော်တော်အဆင့်မြင့်နေပြီ။ လက်မှတ်ကိုတောင် ကွန်ပျူတာနဲ့ အရောင်းစာရေးမကလဲ ချိုချိုသာသာနဲ့။ ကျွန်မတို့ ဆိုက်လာသမျှရထားတွေကြည့်ရင် ရထားက မဆိုးဘူးနော် အချိန်မှန်သားပဲလို့ ပြောလို့မှမဆုံးသေးဘူး ကျွန်မတို့စီးမယ့်ရထား အချိန်မှန်မ၀င်နိုင်လို့ နာရီဝက်နောက်ကျမယ့်အကြောင်း တောင်းပန်တဲ့အသံထွက်လာပါတယ်။ တစ်နာရီတောင် စောင့်ပြီးမှတော့ နောက်ထပ် နာရီဝက် ဘာအရေးလဲပေါ့။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဆက်စောင့်လိုက်ရပါတယ်။
ရထားလာတော့ ကြုံတဲ့တွဲတစ်တွဲပေါ်တက်လိုက်ပြီး နေရာရှာရတယ်။ လူတွေက တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ နှစ်ယောက်ခုံကို တစ်ယောက်ထဲခြေထောက်ဆင်းပြီး အိပ်ပြီးလိုက်လာတဲ့သူကရှိသေးတယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့ မဖယ်ပေးချင်သူတွေလဲတွေ့ရတယ်။ ရွေးစရာနေရာမရှိတဲ့အဆုံး ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ထဲ ခြေဆင်းပြီးထိုင်နေတဲ့ခုံရှေ့မှာ ထိုင်ချင်တဲ့အမူအယာပြလိုက်တော့မှ မိန်းကလေး ၃ ယောက်မို့လို့လားတော့မသိဘူး သူ့တစ်ယောက်စာပဲနေရာပြန်ယူပြီး ကျွန်မတို့ကို နေရာပေးပါတယ်။ ၂ ခုံ မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံတွေမို့လို့ ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ၃ ယောက်က ရထားတစ်ခါမှ မစီးဖူးတဲ့သူတွေမှန်း အရမ်းကိုများသိသာနေလားမသိဘူး မျက်လုံးတွေက ကျွန်မတို့ဆီမှာရောက်နေကြတယ်။ သူတို့ရောက်လဲ ရောက်ချင်စရာ။ ထိုင်လိုက်ပြီးတာနဲ့ လက်မှတ်ရှာလို့မတွေ့ … ပျောက်သွားပြီလေ .. ကျွန်မတို့ ၃ ယောက် ပြာယာခတ်နေတာကို ဘေးလူတွေက ဂရုဏာသက်ပြီး ၀ိုင်းအကြံပေးကြတယ်။ ရှေ့ဘူတာမှာဆင်းလိုက်တော့တဲ့။ လက်မှတ်စစ်နဲ့တွေ့ရင် ဒါဏ်ငွေ ၁၀ ဆ ရိုက်မှာတဲ့။ ဘူတာမှာရပ်ချိန်က လက်မှတ်ဆင်းဝယ်ရလောက်အောင် အချိန်ကမရဘူး။ အဲဒါမှ ပြသနာ … တစ်နာရီခွဲတောင် စောင့်စီးထားရတဲ့ရထားကို လက်လွတ်မခံနိုင်ဘူးလေ။ ကံကောင်းစွာပဲ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ကောင်မလေးက ကျွန်မတို့တွဲပေါ်မှာပါလာတယ်။ ကျွန်မတို့လက်မှတ်ဝယ်တာ သူသက်သေရှိတယ်လေ။ အဲဒါနဲ့သွားပြောတော့ လက်မှတ်စစ်လူကြီးက ရှေ့ဘူတာမှာ သူဝယ်ပေးမယ်။ လက်မှတ်ဖိုးပြန်ပေးလို့ပြောလို့ တော်သေးတာပေါ့။ လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ပုံမှန် ၃၀၀ ပေမယ့် ကျွန်မတို့ပေါ့ဆမိလို့ ၆၀၀ နဲ့ စီးလိုက်ရတာက အမှတ်တရပါပဲ ..
ပိတ်ရက်ဖြစ်နေလို့ ရထားပေါ်မှာ လူစည်နေတယ်။ တစ်ဝက်လောက်က ကျွန်မတို့လိုပဲ ရထားကို မြို့ပါတ်ပြီး အပျော်စီးနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြတယ်။ အစားအသောက်တွေ ကလေးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါး။ ကျွန်မတို့အရင်ရောက်နေပြီးသားခရီးသည်တွေက သတင်းပေးကြတယ်။ အခုစီးနေတဲ့ရထားက ပျက်နေတာတဲ့ .. လက်ပူတိုက်ပြီး ထွက်နေတာမို့လို့ ကြာလိမ့်မယ်တဲ့။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့ ကြာတော့ ပိုတန်အောင်စီးရတာပေါ့လို့ပဲ တွေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ ရထားလမ်းဘေး ရှုခင်းတွေကို ကြည့်ရင်း တစ်ရွေ့ရွေ့သွားနေတဲ့ရထားပေါ်ကနေ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက် မုန့်စားလိုက် လူတွေကိုစပ်စုလိုက်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းခဲ့ပါတယ်။
အိမ်တွေက ရထားလမ်းဘက်ကို ဖင်ပေးထားတာများတဲ့အတွက် စကားပုံတစ်ခုကိုတောင် သတိရမိသေးတယ်။ မျက်နှာမှာ သနပ်ခါး ပေါင်မှာ သေးကြောင်းနဲ့ ဆိုသလိုပဲ … စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ ညစ်ပါတ်နေတဲ့ စိတ်ပျက်စရာမြင်ကွင်းတွေ၊ ရေစပ်စပ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ စိုက်ထားတဲ့ ကန်စွန်းခင်းတွေ၊ မြင်မကောင်းတဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးတွေ၊ မိုးရွာပြီးပြီမို့လို့ စိမ်းစိုနေတဲ့ မြက်ပင်တွေ၊ ကောင်းကင်ပြာကြီးနဲ့ တိမ်လွှာဖြူဖြူလေးတွေ မြင်မြင်သမျှကို ရသလောက် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စုစုပေါင်း ၄ နာရီတောင် ကြာပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ၂ နာရီခွဲပဲ ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လှုပ်စိလှုပ်စိအရှိန်နဲ့ စီးရတာ ချော့သိပ်နေသလိုပဲ ခေါင်းမူးလာလို့ နောက်ပိုင်း တစ်နာရီလောက်ကို အကြာကြီးလို့တောင် ထင်လိုက်မိပါတယ်။
အဲကွန်းရထားမို့လို့ အသေတပ်ထားတဲ့မှန်ထူထူတွေကြောင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ရာမှာ အလင်းပြန်မှုနဲ့ မှုန်ဝါးမှုတွေရှိပေမယ့် အမှတ်တရအနေနဲ့ ပြချင်လို့ စုစည်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ….
ခင်ဇော် says: ၁၁။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: တချို့ဘူတာလေးတွေက ဆင်းတောင်ရိုက်ဖို့ကောင်းသဗျ…
ကြောင်ဝတုတ် says: တစ်ရက်လောက် မြို့ပတ်ရထားစီးပြီး ဒါ့သေသွားရိုက်ကြမလား…
weiwei says: ​နောက်​တစ်​ခါ ရိုးရိုးရထားစီးပြီး တစ်​​ခေါက်​ထပ်​သွားရိုက်​ချင်​​သေးတယ်​။ ၂၀၀ နဲ့ မြို့ပါတ်​မယ်​။
aye.kk says: 15,16,17
​ဒေါ် လေး says: ၁၆
ကျွန်မ အဲကွန်းရထား ပေါ်ကာစ ကသွားစီးသေးတယ်
အဲတုန်းက လူတော်တော် ရှင်းတယ်
ဘူတာကြီး အစ ကနေ ဘူတာကြီးဆီ ပြန်လာဆုံးတယ်
မြစပဲရိုး says: ဒီတစ်တခေါက် ရထားစီးဖို့ လုပ်သေးတယ်။ ကလေး ကို ပြချင်လို့။
ခါးပိုက်နှိုက်ခံ ရမယ်။ လူတိုးခံရမယ် ဝိုင်းခြောက်တာ နဲ့ မစီးဖြစ်တော့တာ။
ကင်မရာကောင်းလွန်းလို့လားမသိ၊ မှန်ခံနေတာတောင် အရောင်တွေက စိုနေတာဘဲ။ :-))
Ma Ma says: မြို့ပတ်ရထားစီးဖို့ ကြံဖူးသေးတယ်။
ရထားက မြင့်လို့ တက်ရခက်တယ်။
အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ ပြောတာနဲ့ အဖော်လည်း မရှိတာနဲ့ မစီးဖြစ်ဘူး။
ရထားကို အပျော်လိုက်စီးကြသူတွေတောင် ရှိတယ် ဟုတ်လား။
နံပါတ် ၉ ပုံကို ကြည့်ပြီး လားရှိုးသိန်းအောင်ဆိုတဲ့ လယ်သူမလေး ဆိုလား အဲဒီသီချင်းကို သတိရမိတယ်။
၂၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၅ ပုံလေးတွေ သဘောကျတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဒါနဲ့ အဲကွန်းရထားက အဲကွန်းကအေးလားဟင်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နောက်တစ်ခါရန်ကုန်လာရင်သွားမယ် အိမ်နားလေးက ဘူတာက တက်စီးရင်ရတယ်တဲ့။
Ma Ei says: အရင်က ဝေဇယန္တာလမ်းမှာနေတာမို့ ဘောက်ထော်ဘူတာကနေ
အဲ့တုံးကတော့ အချိန်မမှန် ညစ်ပါတ် စုတ်ပြတ်နေတာပါဘဲ…
ကလေးလဲ စီးဘူးအောင် တစ်ရက်တော့ လိုက်စီးပါဦးမယ်…
ခင်ခ says: ကျွန်တော် အထကကျောင်းသားဘ၀က လှည်းတန်းဘူတာကနေ လမ်းမတော်ဘူတာကို ကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်း ရထားနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ရတာတောင် ပြန်ပြောင်းအောင်းမေ့သွားတယ်ဗျာ၊ အဲတုန်းက ခုလိုအဲကွန်းနဲ့တော့ ဟုတ်ဘူးပေါ့ အခုတော့ ခေတ်မှီတိုးတက်လာပြီပေါ့နော်။ အဲ ရထားအချိန်မမှန် နောက်ကျတတ်တာတော့ အရင်တုန်းကလိုဘဲ ဖြစ်နေစဲဗျ။ ဒါတော့ မတိုးတက်သေးဘူးပေါ့လေ။ ရုပ်ဝတ္ထုဘဲတိုးတက်လာတဲ့ ပြယုဒ်အဖြစ်ပေါ့။
Mike says: .ရထားနဲ့ လေးနှစ်တိတိ ကျောင်းတက်ခဲ့တာ…အဲ့တုန်းက ကျောင်းသားအတွက် လပေးလက်မှတ်မှ
.ကိုးကျပ်ပဲကျတယ်…ခုတော့မစီးဖြစ်တော့ဘူး…
တောင်ပေါ်သား says: လှည်းတန်းကနေ ရွာမအထိ ရထားစီးပြီး အင်းစိန်ဂျီတီအိုင်တက်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို လွမ်းသွားတယ်ဗျာ ၊
အခုတော့ ၄၅ တို့ ၁၇၄ တို့ ၁၈၈ တို့ ၂၂၆ တို့နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရတယ် ၊
Alinsett @ Maung Thura says: ဂျပိုးရော မကိုက်လိုက်ဘူးလား
ကိုက်တဲ့ ဂျပိုးတွေကိုရော…. သေချာ ချိန် ရိုက်ခဲ့စေချင်။။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဂျာပွမ် ကျည်ဈာန် ရထားလို အရှိန်မြန်ရင် မန်းလေးရန်ကုန် အလှုပ်သွား အလှုပ်ပျံ ဖြစ်မဲ..။